FBS ကုမ္ပဏီမှ အလိုအလျှောက်၊ ချက်ခြင်းငွေထုတ်ယူနိုင်သော စနစ်အားစတင်လိုက်ပါပြီ။
FBS မှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး အမြတ်များရှာဖွေရတာ ပိုပြီး လွယ်ကူချောမွေ့ လာပါပြီ!
ကျွန်ုပ်တို့မှ အလိုအလျှောက် ငွေထုတ်ယူခြင်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်မဆို သင့်ရဲ့ စရံငွေများနှင့် အမြတ်ငွေများကို ကိုယ်ပိုင် e-wallet ထဲသို့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လွှဲပြောင်းထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ!
အောက်ပါ ငွေပေးချေမှုစနစ်များမှ ချက်ခြင်းငွေထုတ်ယူခြင်း ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်-
ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ဆောင်ခ မယူပါ။
အလိုအလျှောက် ငွေထုတ်ယူလို့ရဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
၁။ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ငွေပေးချေမှုစနစ်များထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီ စရံငွေထည့်သွင်းပါ။
၂။ အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး အမြတ်ရအောင်လုပ်ပါ။
၃။ စရံငွေထည့်သွင်းတုန်းက အသုံးပြုတဲ့ wallet ထဲသို့ ချက်ခြင်းပြန်လည် ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိထားရန် - သင့်ငွေကြေးလုံခြုံမှုအတွက် အလိုအလျှောက်ချက်ခြင်းငွေထုတ်ခြင်းကို စရံငွေထည့်သွင်းတုန်းက အသုံးပြုတဲ့ e-wallet ကိုပဲအသုံးပြုမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အကျိုးစီးပွားအတွက် အလွယ်ကူ၊ အဆင်ပြေဆုံးသော အရောင်းအဝယ် အနေအထားများကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ဖြုန်းမနေပဲ FBS မှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး အမြတ်များရယူလိုက်ပါ!